Gossip News | News Filmy
चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । असोज ११ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्रको पहिलो गीत टिजर सार्वजनिक भएको केही दिनपछि पहिलो गीत ‘ए दाजु’ सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक गीतमा अल्मोडा राना उप्रेती र सुजता बर्माको स्वर , प्रिन्स र अल्मोडाको संगीत तथा प्रिन्स र दीपकराज गिरीको शब्द छ । यस्तै read more
अनुप भट्टराई (फरक कोण) यस्तै छ फिल्म नगरीको चलन । अन्तत : झण्डै तीन बर्षे लामो प्रेम सम्बन्ध पश्चात हिरो आयुषमान देशराज श्रेष्ठ र हिरोइन परमिता राना बीचको सम्बन्धमा पनि पूर्ण विराम लागेको छ । न्यूज फिल्मीलाई प्राप्त एक्सक्लुसिभ खबर अनुसार आयुष र परमिताको सम्बन्धमा पूर्ण विराम लागेको तीन हप्ता बढी भईसकेको छ । प्रेम read more
अनुप भट्टराई (फरक कोण) ड्रिम्स फिल्मबाट धमाकेदार डेब्यू गरेकी हिरोइन साम्राराज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले ब्यायफ्रेण्ड सार्वजनिक गरेकी छिन् । शुक्रबार परेको आफ्नो२१ औँ जन्मदिनको अबसरमा उनले आमा सहित ब्यायफ्रेण्डसंग अंगालो हालेको फोटोलाई कोलाज बनाएर फेसबुकको टाईमलाईनमा पोष्ट गरेसंगै हामीले उनको ब्याफ्रेण्डको बिषयमा यो समाचार बनाउने जमर्को गरेका हौ । सार्वजनिक फोटो संगै साम्राज्ञीले दिन हरु read more
सिक्किममा आज हुँदै ईनाश अवार्ड : निरुता देखि राजेश हमाल दम्पती सम्म (फोटो फिचर)
भारतको सिक्किम स्थित गान्तोक शहरमा आज साँझ हुन गईरहेको चौथो ईनाश नेपाली फिल्म अवार्डमा सहभागी हुन निरुता सिंह देखि लिएर राजेश हमाल दम्पती समेत उपस्थित भएका छन् । ईनाश ग्लोबलका पदाधिकारी सहित नेपालबाट आएका करिब १ सय ३० फिल्मकर्मी र पत्रकाहरुको लिष्ट हेर्दा आर्यन सिग्देल देखि लिएर नीर शाह, करिश्मा मानन्धर, दीपाश्री निरौला, दीपकराज गिरी, read more
Gossip ! सौगात मल्ल र श्रृष्टी श्रेष्ठ बीच के पाकिरहेको छ ?
तपाईलाई यो खबर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर हाम्रा गसिप श्रोत अनुसार पछिल्लो समय सौगात मल्ल र गाजलु हिरोइन श्रृष्टी श्रेष्ठ निकै नजिकका साथी बन्न पुगेका छन् । उनीहरुको यो फ्रेण्डसिप केबल फ्रेण्डसिप मात्र हो वा त्यो भन्दा अझ गहिरो छ , यस बिषयमा अहिलेनै दावी गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन् तर श्रोत अनुसार सौगातको शब्द नामक read more
सेलिब्रेटीले सेलिब्रेटीलाई राखिदिएँ यस्तो नाम : करिश्मा गोदावरी भुवन केसी डिंगो
अनुप भट्टराई (फरक कोण) अन्यथा भएमा या कसैको अपमान भएमा हामीलाई माफ गर्नुहोला तर फिल्म नगरीमा सेलिब्रेटीहरुलाई उनीहरुका साथीभाईहरुले माया र ब्यग्य दुवै संयोजन गरेर बोलाउँने नामलाई आज हामी तपाईहरु समक्ष दूधको दूध पानीको पानी जसरी सार्वजनिक गर्ने प्रयाश गर्दैछौ । यो लिष्टमा बरिष्ठ फिल्मकर्मी नीर शाह देखि लिएर संगीतकार शम्भूजीत बासकोटा, भुवन केसी, किरण केसी, read more
छि… सुष्मा कार्कीको आफ्नै साथीबाट यस्तो घिनौना Prank
जिस्कनुको पनि हद हुन्छ । त्यस माथि आफ्नो नजिकको साथीबाट भएको एउटा घिनलाग्दो प्रयाङ्कले सुष्मा कार्कीको बाँकी बचेको पपुलारिटीमा पनि असर पुगेको हाम्रो निस्कर्ष छ । करिब साढेँ आठ बजेको समयमा सुष्मालाई ट्याग गर्दै उनका नजिकका साथी अनुपम श्रेष्ठले एक सनसनीपूर्ण खबरलाई फेसबुकमा पोष्ट गरेपछि सुष्मा र अनुपमको हर्कतलाई लिएर फेसबुकमा आलोचना भएको हो । बाउन्सर read more
Exclusive : Hostel Returns की हिरोइनसंग निश्चल बस्नेतको विहे हुने !
नेपाली फिल्म उद्योगका नम्बर वान निर्देशक निश्चल बस्नेतको विहे Hostel Returns की हिरोइन स्वस्तिमा खड्कासंग हुने सम्भावना देखिएको छ । न्यूज फिल्मीलाई प्राप्त एक्सक्लुसिभ खबर अनुसार आउँदो मंसिर भित्रै विवाह गर्ने गरी दुई परिवारमा विवाहको कुरो चलिरहेको छ । यध्यपी निश्चल र स्वस्तिमाले परिवारको प्रस्तावलाई कसरी लिने हुन त्यो भने फाईनल भईनसकेको सोर्स बताउँछ । read more
ब्रेकअपको हल्ला : शरदसंग झगडा परेपछि निशा उडिन अमेरिका !
क्रिकेटर शरद भेषवाकरसंगको माया प्रेममा रहेकी हिरोइन निशा अधिकारीको सम्बन्ध विग्रिएको खबर बाहिरिएको छ । प्राप्त खबर अनुसार ब्यक्तिगत कुराहरुमा विवाद भएपछि उनीहरु अलग्गिने बाटो तर्फ मोडिएका हुन । यध्यपी यो खबरको पूर्ण पुष्टी चाँहि भईसकेको छैन् । तर सम्बन्धले नयाँ मोड लिएपछि निशा अधिकारी गत शनिबार सुटुक्क अमेरिका तर्फ उडेको खबर छ । हरेक स- read more